Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw Tianeptine powder (66981-73-5) video
Raw Tianeptine powder is anti-depressant agent ine inobudisa neurochemical profile.Raw Tianeptine powder haina kuonekwa kuti inobatanidza nekusaziva kusagadzikana, mupfungwa, kurara, mwoyo, kana muviri bodyweight uye ine simba rekushandisa kushandiswa. Raw Tianeptine powder ine inofanirwa nefarmokinetic profile. Haisi pasi pekutanga-pass hepatic metabolism, ine bhaovaidho yakakwirira uye kugovera kuduku, uye inokurumidza kubviswa. Kunyange zvazvo izvi zvinopa zvipo zveRaw Tianeptine powder pamusoro pe tricyclic vanodzvinyirira maitiro maererano nehuwandu hwekutora, kuchinja kwehutano uye kushandiswa kwemishonga, kushandiswa kwekukurumidzira kunoita kuti kuratidzira zvirongwa zvekuwedzerwa kunokosha zvikuru. Raw Tianeptine powder inopesana nevakawanda vanodzvinyirira mukuti haisi kunyanya kugadziriswa nehepatic cytochrome P450 system, inoratidza huwandu hushoma hwekubatana kwezvinodhaka-zvinodhaka; izvi zvinonyanya kukosha kuvarwere vakwegura.
Raw Tianeptine powder (66981-73-5) Tsanangudzo
Kemikari Name Raw Tianeptine powder; 66981-73-5; 72797-41-2; Raw Tianeptine powder Acid; Raw Tianeptine powder
Kirasi yeMishonga depressive episodes
Molecular Wsere 436.951 g / mol
Kunyorera Point 148
APane Icho chirwere chinoshandiswa mukurapa maitiro makuru ekuora mwoyo (munyoro, kuenzanisa, kana kuoma).
Tianeptine powder chirwere chinonyanya kushandiswa kugadzirisa zviratidzo zvekunyanya kuora mwoyo (MDD). Ive yakashandiswawo kubatsira rubatsiro rwechirwere chirwere uye asthma. Yakarongeka, inorondedzerwa se tricyclic antidepressant (TCA), zvisinei, iyo ine mishonga yakasiyana-siyana yemishonga yepamusoro kune yakasiyana neyo tricyclic vanodzvinyirira. Tianeptine yakawanikwa uye yakave nekodzero yehurumende yeFrance yeUrongwa hweUrwere muZ1960s. Iko mazita ezita anosanganisira Stablon, Coaxil. Tatinol, Tianeurax, uye Salymbra.
Tianeptine powder haina kuonekwa kuti inobatanidza nekusagadzikana kwepfungwa, psychomotor, kurara, yemwoyo, kana muviri bodyweight uye ine unhu hushoma hwekushandisa zvisina kunaka. Raw Tianeptine powder ine inofanirwa nefarmokinetic profile. Haisi pasi pekutanga-pass hepatic metabolism, ine bhaovaidho yakakwirira uye kugovera kuduku, uye inokurumidza kubviswa. Kunyange zvazvo izvi zvinopa zvipo zveRaw Tianeptine powder pamusoro pe tricyclic vanodzvinyirira maitiro maererano nehuwandu hwekutora, kuchinja kwehutano uye kushandiswa kwemishonga, kushandiswa kwekukurumidzira kunoita kuti kuratidzira zvirongwa zvekuwedzerwa kunokosha zvikuru. Raw Tianeptine powder inopesana nevakawanda vanodzvinyirira mukuti haisi kunyanya kugadziriswa nehepatic cytochrome P450 system, inoratidza huwandu hushoma hwekubatana kwezvinodhaka-zvinodhaka; izvi zvinonyanya kukosha kuvarwere vakwegura.
Munguva pfupi yapfuura, Tianeptine inowanikwa muEurope, Asia, uye kuSouth America nyika. Inorambidzwa muUnited Kingdom uye haisi yemishonga inorayirwa navanachiremba muUnited States.
Tianeptine powder (66981-73-5) Mechanism of Action
Zvidzidzo zvenguva pfupi zvinoratidza kuti tianeptine inoshanda segonist yakazara pa-mu-type opioid receptor (MOR). Iko mu-opioid receptors ikozvino inodzidzwa sezvinangwa zvinobudirira zvekunetseka kunorapwa. Inofungidzirwa kuti makiriniki emigumisiro ye tianeptine inokweretwa nekugadzirisa kwezviputi izvi. Mukuwedzera pane zviito zvayo pamusana weopioid, zvidzidzo zvekare zvakakwereta zvayo kuti zviitike pane serotonin receptor dopamine (D2 / 3) receptors uye glutamate receptors.
Tianeptine powder isiri yakasiyana-siyana inopesana nemanzwiro uye mishonga yekufungidzira inokurudzira kubatwa kwe serotonin (5-hydroxytryptamine; 5-HT), uye 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) muhunhu hwehupi.
Kushandiswa kwePianeptine powder (66981-73-5)
▪ Tianeptine inovandudza zviratidzo zvekunyanya kuora mwoyo (MDD)
❑ Tianeptine rubatsiro runokanganisa bowel syndrome uye asthma
▪ Tianeptine inovandudza mafungiro uye inokurudzira kufunganya.
▪ Tianeptine inowedzera kuti serotonin yakawanda sei muuropi
▪ Tianeptine inokurudzira kukurudzira, kuisa pfungwa uye kugona, kugadzirisa kushushikana, kugadziriswa uye kuderedza kuneta kwekunzwisisa.
Yakakurudzirwa Tianeptine powder (66981-73-5) Dosage
Tianeptine poda inowanzonyorerwa pamutengo we 12.5 mg uye inotorwa katatu pazuva. Kusiyana nedzimwe TCA uye kusarudza serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), maitiro etianeptine haafaniri kuwedzerwa zvishoma uye kuwedzerwa apo mishonga inorega haifaniri kudiwa.
Zvimwe zvikamu zveTianeptine powder (66981-73-5)
Izvozvo zvinokonzerwa nehuaneptine poda zvinoshamisika zvishoma. Kuenzaniswa nedzimwe TCA uye kunyange SSRI kirasi yevanhu vanodzvinyirira, tianeptine poda inenge isisina madhara. Pasinei nemaronda ayo ane ruzivo rwakakosha, zvakakosha kusanganisa tianeptine ne monoamine oxidase inhibitors kana zvimwe zvinodhaka zvinopesana sezvo kuwirirana kungave kutyisa upenyu. Tianeptine haifaniriwo kusanganiswa ne anesthetics uye kushandiswa kwayo kunofanira kurega 24-48 vasati vasarudza kupindira kunoda anesthetics kana hypnotics. Heano maitiro mashoma emigumisiro inowanzobatanidzwa ne tianeptine.
▲ kutadza kurara
▲ Kuchinja kwechido
▲ Kuora mwoyo kupera
▲ Chiratidzo chakasvibiswa
▲ Kuita zvepabonde kukanganisa